लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २० पुस २०७५)
भारतीय जीवन बीमा निगम र विशाल ग्रूपको पहलमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) को स्थापना भएको हो । यस कम्पनीमा सबैभन्दा बढी ५५ प्रतिशत भारतीय जीवन बीमा निगमको, विशाल ग्रूपको २५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । यो कम्पनी नेपालको जीवन बीमा उद्योगमा आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने पहिलो एवम् एकमात्र जीवन बीमा कम्पनी हो ।
। हाल रू. १ अर्ब ३३ करोड ४६ लाख ७७ हजार चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीले आगामी असार मसान्तसम्म रू. २ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउनुपर्नेछ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म रू. २ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउन निर्देशन दिए पनि विविध कारणले पूँजीवृद्धिका लागि समस्या भएको भन्दै आगामी असार मसान्तसम्मको समय अवधि खुला गरेको छ । यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभा हालसम्म सम्पन्न गरेको छैन । कम्पनीले सोही वर्षको मुनाफाबाट १२ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । साउन २४ गतेको सञ्चालक समितिले उक्त प्रस्ताव गरे पनि साधारणसभाका लागि भने कुनै सूचना जारी भएको छैन ।
2019-01-04 - 156 view(s) - abhiyan